China Customizable ika 160 na-ehichapụ kwa tragaasi 75% mmanya na-ehichapụ Manufacturer na Supplier | Ka mma
Etemeete remover hichapụ
Wigbọ ala na-ehichapụ
Anụ ụlọ na-ehichapụ
Handgba aka aka
Gel aka na-edozi ihe
Moisturizing akpụkpọ-enyi na enyi etemeete remover hichapụ
72 na-ehichapụ Ezigbo glọ Na-ehicha Baby
Na-egbu 99% nke nje na-emerụ antibacterial hichapụ
Customizable ika 160 na-ehichapụ kwa tragaasi 75% alcoho ...
KN95 Nchebe nkpuchi
75% Alcohol Instant Antibacterial Spray Hand Sanitizer. Ọgwụ
Customizable ika 160 hichapụ kwa tragaasi 75% mmanya hichapụ
Chepụtara ka enwere ọgwụ kemịkal siri ike, ma sie ike na nje! Chebe onwe gị site na ihichapụ nje na nje bacteria nwere ike ibute ọrịa site na aka n'oge na mgbe ịnọ n'ụlọ ahịa, ụlọ nri, ọfịs, klaasị, ebe obibi, kichin, ebe obibi, n'oge njem, na ndị ọzọ.
* Ngwaahịa ngwaahịa
Product aha: Adịchaghị mmanya 75 siri ike na ike
Nọmba nlereanya: BT-001
Ihe: na-abụghị kpara
Ihe eji arụ ọrụ: Mmanya na-egbu egbu 75%, Nov-kpara, Ro-water
Agaghị arụ ọrụ Efrata: Mmiri, Aloe Vera, senti Citrus
Nha: 5.9 ”* 7.1”
Arọ (Gramme / Square Mita): 45m
Iberibe kwa ike: 160 PC
Kpọmkwem ojiji: Antibacterial, disinfection na nhicha.
MOQ: Mkpọ 5000
Asambodo: OA, FDA, EPA, MSDS
Mbukota nju： Mkpọ 18 / katọn
OEM & ODM: Nabata
Oge ịkwụ ụgwọ: L / C、D / A、Ebube D / P.、T / T、Western Union
Akwa-75% Alcohol Sanitizing Wipes
Jiri nhicha aka tupu ị rie nri ma ọ bụ mgbe ị metụsịrị nri nje / nri nnyapade na maka nhicha kwa ụbọchị, ọkachasị mgbe ncha & mmiri adịghị.
Nwere moisturizing Aloe Vera.
Maka nhicha na mbenata bara nnukwu uru na nje nwere ike ibute ọrịa mgbe ncha & mmiri adịghị.
* Wardọ aka na ntị
Maka iji mpụga. Enwere ike iwepụ ọkụ, zere ma ghara ịchekwa n'akụkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Ejila gburugburu egbutu ma ọ bụ akpụkpọ agbaji, gburugburu anya, ma ọ bụ ụmụaka na-erubeghị ọnwa 2. Nwere ike ime ka iwe na anụ ahụ dị nro, kwụsị iji ma ọ bụrụ na iwe ma ọ bụ ọkụ ọkụ pụtara; lelee ndepụta mgwa ihe tupu i jiri ya ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị ahụ. Ekwela ka ụmụaka rute. N'ihe banyere anya anya, gbanye ọtụtụ mmiri. Ọ bụrụ na iwe anụ ahụ, saa mmiri ahụ ozugbo, jiri ncha ma ọ bụrụ na ọ dị. Chọọ nlekọta ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na iwe na-adịgide.
* Ntuziaka maka ojiji
Wepu elu, wepu foil, ọkụ n'elu pop, tinye hichapụ site na mmeghe, ma jiri nwayọ wepụ iji wepụ hichapụ. Jiri nwayọ hichaa aka iji wepụ nje na nje bacteria Mgbe ejiri ya, mechie elu ka ịhichapụ mmiri. Ekpochapu, biko tufuo hichapụ na ahịhịa mgbe eji. Biko gbagharịa tragaasi ebe o kwere mee.
* Ozi ndị ọzọ
Adị ndụ afọ 2 ma ọ bụrụ na emegheghi akara akpa. Na-echekwa na jụụ, nkụ. Ikpo ọkụ dị ọkụ nwere ike belata oge ndụ ma ọ bụ hichapụ hichapụ. Nwere ike ịchọpụta ụfọdụ akwa na elu osisi.
Nke gara aga: 75% Alcohol Instant Antibacterial jel Hand Sanitizer
Osote: Na-egbu 99% nke nje na-emerụ antibacterial hichapụ
Okwu: Nke 908, Academician Road, Fenshui Town, Tonglu County, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Alibaba weghachite Tmall na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia ...
Na 2020, ụwa abanyela na isi ...
Iji na-akwado gị ezigbo emeputa, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.